बुहारी बुधवार किन घर जानु हुँदैन ?:: Naya Nepal
बुहारी बुधवार किन घर जानु हुँदैन ?
काठमाडौँ । शास्त्रहरूमा हप्ताको हरेक दिन कुनै विशेष कार्य गर्न निषेध गरिएको छ। यसमा दैनिक जीवनसँग जोडिएका कुराका अलावा यात्राका लागि निषेधित वार पनि छ।
यहाँ हामी बुधवारसँग जोडिएको त्यो मान्यताका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ । जसअनुसार छोरीहरूलाई बुधवार ससुराल पठाउन हुँदैन।
बुधवार छोरीलाई घर पठाउँदा दुर्घटनाको सम्भावना हुन्छ। यति मात्र नभई छोरीको घरसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रिन्छ । शास्त्रमा यस अपशकुनसँग जोडिएको कारणको व्याख्या पनि छ ।
दुवैजना गोरुगाडा चढेर घर फर्किंदै थिए । अचानक बाटैमा गाडीको पांग्रो खुस्कियो । त्यसपछि उनीहरू पैदलै हिँडे । एक ठाउँमा पुगेपछि संगीतालाई तिर्खा लाग्यो । मधुसूदनले उनलाई रुखमुनि राखेर पानी खोज्न गयो ।
उक्त व्यक्तिले भन्यो, ‘अरे, यो मेरी पत्नी संगीता हो। तिमी चाहिँ को हौ नि मलाई प्रश्न सोध्ने ?’ यो सुनेर मधुसूदन खुबै रिसायो र झगडा गर्न थाल्यो । उनीहरूको झगडा देखेर नगरका सिपाहीहरू त्यहाँ आए । सिपाहीले दुवैलाई पक्रिएर राजाकहाँ लगे ।
राजालाई पनि असली नक्कली छुट्ट्याउन गाह्रो भयो। उनले दुवैलाई जेलमा हालिदिने आदेश दिए।
त्यतिखेरै आकाशवाणी भयो, ‘मधुसूदन, तैंले संगीताको आमाबुवाको कुरा नमानेर पत्नीलाई माइतबाट बिदा गराइस्। अब बुध भगवानको प्रकोपले तँमाथि संकट आयो।’
मधुसूदनले गल्ती मान्यो। उसले भगवान् बुधदेवसँग क्षमाप्रार्थना ग-यो र भविष्यमा कहिल्यै पनि यसो नगर्ने प्रण ग–यो। मधुसूदनको प्रार्थना सुनेर बुधदेवले उसलाई माफी दिनुभयो । त्यतिखेरै अर्को व्यक्ति गायब भयो।
अरू मानिस पनि यो चमत्कार देखेर छक्क परे । उक्त व्यक्ति बुधदेव आफैं हुनुहुन्थ्यो।